Tsy fandriampahalemana : potika ny fihariana lavanila | NewsMada
Tsy fandriampahalemana : potika ny fihariana lavanila
Par Taratra sur 12/08/2017
Nitondra fahavoazana ! Tsy nampandroso nylalam-pihariana lavanila ny fidangan’ny vidiny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Maro ny voka-dratsiny na nitombo avo roa heny aza ny vidiny, tafakatra 140 dolara (413.000 Ar) ny kilaon’ny masaka, ny taona 2017 raha 65 dolara (191.880 Ar) ny teo aloha. Tsy nitondra tombontsoa ho an’ny maro anefa, indrindra ny tantsaha mpamboly lavanila io vidiny io, fa zava-dratsy aza no naterany amin’ny tsy fandriampahalemana vokatry ny halatra eny am-potony miampy ny vonoan’olona.
Mifampiankina ny tolotra lavanila sy ny tinady mpanjifa, manova ny vidiny. Mitombo isa ireo mpandraharaha tsy matihanina fa manambola, saika avy amin’ny fanondranana tsy ara-dalàna andramena ny ankamaroany ary mamotsy ny vola mividy lavanila any amin’ny tantsaha. Tena nahitana fandripahana andramena rahateo ny any amin’ny faritra Sava sy Analanjirofo, toerana tena mahamaro ny lavanila ihany koa.
Niharatsy ny kalitao
Tena nahalalana azy ireo, nanomboka ny taona 2014, manamarina ny fidangan’ny vidin’ny lavanila eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, voalaza etsy ambony, satria voalohany maneran-tany amin’ny famokarana azy i Madagasikara. Sahy mividy lafo ny lavanila any amin’ny tantsaha ireo mpandraharaha tsy matihanina ireo ary mivarotra lafo any amin’ny mpanjifa any ivelany koa, satria fantatr’izy ireo tsara fa ifarombahan’ny vahiny ny lavanila avy aty Madagasikara.
Amin’izay fitomboan’ny mpanangom-bokatra izay, mahatonga ny tsy fandriampahalemana nirongatra, izay tsy fahita hatramin’izay. Vokany, miharatsy ny kalitao satria maro ireo mitango azy manta sy tsy mbola matoy, tsy ao anatin’ny fotoana isokafan’ny taom- panangonana, voafaritry ny lalàna sy ny fanjakana.
Manodidina ny 2.000 taonina isan-taona ny lavanila aondran’i Madagasikara any ivelany. Miantoka ny 5%-n’ny Harin-karena anatiny faobe (PIB). Mahatratra 60.000 kosa ny tantsaha malagasy mivelona aminy any avaratra sy atsinanan’ny Nosy, ka any Sava ny 35.000 ary any Analanjirofo ny 15.000.